'Szọ Social nke Media to Longevity n'okpuru GDPR | Martech Zone
Gaa otu ụbọchị na-agagharị na London, New York, Paris ma ọ bụ Barcelona, ​​n'eziokwu, obodo ọ bụla, ị ga-enwe ihe mere ị ga-eji kwenye na ọ bụrụ na ịkekọghị ya na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ meghị. Agbanyeghị, ndị ahịa na UK na France na-ezo aka n'ọdịnihu dị iche nke mgbasa ozi mmekọrịta kpamkpam. Nnyocha na-ekpughe olile anya dị egwu maka ọwa mgbasa ozi mmekọrịta dị ka naanị 14% nke ndị na-azụ ahịa nwere obi ike na Snapchat ka ga-adị na afọ iri. N'aka nke ọzọ, email pụtara dịka ikpo okwu ndị mmadụ chere na ọ ga-anwale oge.
Nchoputa nke Mailjet si nnyocha na-egosi na a na-ahụta nyiwe ọhụụ ọhụụ dị ka ihe na-anaghị adịte aka, kama usoro nkwukọrịta ogologo oge, n'agbanyeghị Snap, ụlọ ọrụ nne na nna Snapchat IPO na-abanye tupu afọ a. Agbanyeghị, site n'ọchịchị, ọdịnihu nke mmekọrịta mmadụ na ibe na ndị na-ege ntị ga-adabere na nkwenye doro anya ka anyị na-ahụ iwebata Iwu Nchekwa Data General (GDPR) na Mee nke afọ na-abịa. Social media ga-akpali n'ụwa nke ịpụ na ahia na nkwukọrịta nkwukọrịta nwere ike ọ gaghị abụ otu ihe ọzọ…
Iwu EU General Data Protection (GDPR) dochie Iwu Nchedo Data 95/46 / EC ma hazie ya ka o kwekọọ iwu nzuzo data na Europe dum, iji kpuchido ma nye ikike ụmụ amaala EU niile na ịhazigharị ụzọ ndị otu gafere mpaghara ahụ si abịaru data. nzuzo Forbọchị mmanye: 25 Mee 2018 - n'oge nke ụlọ ọrụ ndị ahụ na-akwadoghị ga-enwe nnukwu ntaramahụhụ. GDPR Peeji mbụ
Kedu otu ụdị akara ga-esi gbasoo GDPR? Akụkọ Instagram, Mgbasa ozi Mgbasa ozi, na Pinterest Pins niile ahụla ụdị na-aga n'ihu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana ha enwetụbeghị ụdị ikike ahụ sitere n'aka ndị ọrụ. Kedu otu akara ga-esi kwekọọ na gburugburu ebe a, ma soro ndị na-ege ntị nwere ikike ịnweta data ha?
Mmejuputa nke GDPR ga eme ka nchedo data diri ndi ahia ike site na ime ka ha sie ike, mejuputa iwu nzuzo nke ihe omuma ma webata uzo abuo. Site na Mee na-esote afọ, ụdị ga-akpachapụ anya banyere etu na mgbe ha na ndị na-ege ntị na-ekwukọrịta. Ọ bụ ezie na ikwenye bụ otu n'ime nsogbu kachasị ha na-eche ihu, ụdị ga-ekwenyekwa na ha na-akpali ndị na-ege ntị na-enye nkwenye ka ukwuu maka ịhazi data ha na mgbasa ozi haziri ahazi.
Sdị ga-egosipụta n'ụzọ iwu kwadoro na atụmanya ọ bụla ha na-esonye na-ekwenyesi ike na ha chọrọ ka ahịa ha baa; igbe apụ apụla agaghị ezu. Iji mee ka ndị mmadụ tinye aka ma debanye aha ha, ụdị ga-anọgide na-arụ ọrụ maka mkpa na ọdịmma ha, na-enye ahụmahụ ha chọrọ na ọwa ọ bụla.
Ọ ga-arụ ọtụtụ ọrụ na nnọgidesi ike maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụdị ndị ọrụ iji hụ na ndị na-ege ntị nọ n'akụkụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe a jụrụ gị banyere mmelite ndị bụ isi na nkwukọrịta akara site na ntanetị mmekọrịta, naanị 6% nke ndị na-azụ ahịa achọpụtala nke Instagram ịzụta bọtịnụ na ngbanwe ihu peeji nke ikpo okwu.
Nke a na-egosi n'ụzọ doro anya na ndị na-azụ ahịa anaghị achọpụta ọfụma na chanel ndị ha na-eji belụsọ ma ha na-emetụta ụbọchị ha kwa ụbọchị. Iji nweta nkwenye maka ịre ahịa, nyiwe ndị a ga-enwerịrị ike iji gboo mkpa nke ndị na-azụ ahịa ma debe ahụmịhe ahụ na-enweghị ntụpọ site na mmeghachi omume na usoro nnabata.
Na-ewere ndu site na Email
Branddị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ enweghị mgbe ọ bụla iji hụ na ha nwetara 'ịbanye' tupu ndị na-eri nri ahụ ha, agbanyeghị ọwa nwere ike isi n'aka ibe ha kọwaa ụzọ kachasị mma isi gbanwee ụkpụrụ na-abịanụ. Ihe ntanetị dị ka Snapchat na-eme mkpọtụ n'etiti ụfọdụ igwe mmadụ n'oge ahụ, mana email ka bụ ọwa nke ndị ahịa na-aga n'ihu na njem ịzụta.
Email dị nkọ. O meela ka ndị ahịa jiri saịtị ịzụ ahịa n'ụzọ nke mmekọrịta na-adịbeghị. Nke anyi research achọpụta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa na-achọ ikike ịzụ ahịa ma ọ bụ ndenye ọpụpụ ozugbo n'ime email iji mee ka njem ahụ bụrụ nke na-enweghị ntụpọ ma dị mfe iji mezue. Email na-eji nke nta nke nta ahaziri nke ọma n'ihe ndị mmadụ nyochara ma ọ bụ gbakwunye na ngwaahịa ha zụtara n'oge na-adịbeghị anya.
Ebe ndị na-eri ya bụ na-etowanyewanye na mgbasa ozi mgbasa ozi, ha nwekwara ike ime mgbanwe, ọ ga-abụkwa na anyị anọghị ebe dị anya n'ịhụ igbe mbata ọdịnala na-ekpuchi kpamkpam site na ọrụ izi ozi ozugbo dị ka Slack na ozi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anwa igbutu okporo ụzọ email site na iwebata ọwa ndị a n'ọfịs ha.
Slack na ozi abụrụla usoro ole na ole tupu mmekọrịta mmadụ na ibe n'ihi na ha ma otu esi ewepụta nkwenye. Izipu ozi, ma ọ bụ ịkekọrịta ọdịnaya site na ọwa chọrọ ịpụ na-eme mgbe niile site na iji OAuth 2.0 (ọkọlọtọ ụlọ ọrụ na-enyere nyiwe ohere ịnweta data onye ọrụ).
Na Slack, ọ dịịrị onye ọrụ ịzaghachi ozi iji nweta ozi ha chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, omume kachasị mma na Slack na-amalite n'ụdị mkparịta ụka mbụ:
Hey anyị enwetala ozi ọhụụ gbasara ụdị oge oyi ọhụrụ anyị - enwere ihe ọ bụla ị ga-achọ ịnụ gbasara ya?
Onye ọrụ ahụ kpebiri ma ha chọrọ ịmekọrịta na ika ahụ. Mkparịta ụka ụzọ abụọ bụ ụzọ kachasị dịrị nchebe ma nwee ọgụgụ isi na ọdịnihu GDPR.
Maka ndị na-ege ntị, nke a pụtara oke mmụba na SPAM achọghị, mana ọ na - arụkwa ọrụ n'usoro mmekọrịta nke obere, narị afọ iri chọrọ mgbaze, ọdịnaya na - enweghị isi n'okwu nke aka ha. Dị ka email dị nso na nso nke kachasị mma na mkparịta ụka ndị ahịa, ndị dike nke mpaghara mmekọrịta mmadụ nwere ike were ọtụtụ isi mmụta sitere na email gbasara otu esi agbanwe, ihe ọhụụ na ntozu.
Tags: nkwenye mgbasa ozinnabataemail nnabataIwu EU Nchekwa DataOAuth 2.0na-elekọta mmadụ media nnabata